हाइड्राफेसियल: छालालाई सुन्दर र स्वस्थ बनाउने एक प्रविधि :: डा प्रमेश कोइराला र डा प्रिया भुसाल :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
हाइड्राफेसियल: छालालाई सुन्दर र स्वस्थ बनाउने एक प्रविधि
कसले गर्न मिल्छ, कसले मिल्दैन?
डा प्रमेश कोइराला र डा प्रिया भुसाल शनिबार, वैशाख २४, २०७९, ०७:३८:००
हाइड्राफेसियल के हो?
हाइड्राफेसियल एक मात्र हाइड्रो-डर्माब्रेसन प्रक्रिया हो। जसले सफा गर्ने र हाइड्रेट गर्ने प्याटेन्ट टेक्नोलोजीको प्रयोग गर्दछ। यो अहिलेको समयमा छालामा गरिने प्रक्रियामध्ये एकदमै लोकप्रिय उपचारमा पर्दछ। हाइड्राफेसियलमा डिभाइसको सहायताले पोर्सबाट फोहोर, सीबम र मृत कोशिकाहरू हटाइन्छ र एन्टी-अक्सिडेन्ट सिरम थपिन्छ। यो उपचार धेरै चरणहरूमा पूरा हुन्छ। यसमा भ्याकुममा आधारित किल्जिङ, एक्सफोलिएसन, एक्सट्रेक्शन, हाइड्रेसन र पोषक तत्वहरूको संयोजन समावेश गरिन्छ। हाइड्राफेसियलको पहिलो चरणमा छालालाई सफा र एक्सफोलिएट गरिन्छ। क्रमिक रुपमा छालामा एसिडको मिश्रित पिल (ग्लाइकोलिक, लाक्टिक र सेलिसिलिक) लगाइन्छ। त्यसपछि एन्टिअक्सिडेन्ट र अन्य हाइड्रेटिङ पदार्थ सिरमको रूपमा छाला भित्र पुर्यानइन्छ। यसले छाला स्वस्थ र चम्किलो बनाउँदछ। हाइड्राफेसियल गरेपछि अनुहार लगभग एक सातासम्म ओसिलो रहन्छ।
हाइड्राफेसियलको फाइदाहरु के के हुन्?
हाईड्राफेसियलको प्रयोगले अनुहारमा भएको चायाँ, कालो दाग, ग्रेड एक डन्डिफोर (साना कनिका जस्ता दाना), फाइन लाइन्स, ओपन पोर्स, आदि जस्तो समस्यालाई हटाउन सकिन्छ। त्यस्तै यदि तपाई पार्टीमा जाँदै हुनुहुन्छ र तुरुन्त चमक चाहानुहुन्छ भने हाइड्राफेसियल गर्न सक्नुहुन्छ, त्यही भएर यो प्रविधिलाई पार्टीपिल पनि भनिन्छ। शारीरिक तनावका कारण छालामा आउने wear and tear (टुट-फुट) जस्ता परिवर्तनमा शिघ्र निखार लेराउनलाई पनि यो एक उपयुक्त प्रविधि हो। बढ्दो प्रदूषणले हाम्रो छालाको छिद्रहरू बन्द हुन्छ, अशुद्धताहरू जम्मा हुन्छ, जुन हाइड्रोफेसियलद्वारा छिटो हटाउन सकिन्छ।
तपाईंले कति-कति समयमा हाइड्राफेसियल गर्न सक्नुहुन्छ?
यो छालाको समस्या मा निर्भर गर्दछ। यदि तपाइँको छालामा धेरै समस्या छ भने प्रत्येक पन्ध्र दिनमा गर्नुपर्छ। यदि तपाईंको छाला स्वस्थ छ र यसलाई कायम राख्न चाहानुहुन्छ भने एक महिनाको अन्तरालमा गर्न सकिन्छ। यो फेसियलमा कुनै विशेष सावधानी अपनाउनु पर्दैन।
हाइड्राफेसियल कसले गर्न मिल्छ र गर्न मिल्दैन?
यो उपचार जुनसुकै उमेरमा र कुनै पनि प्रकारको छालाको टोनमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। धेरै संवेदनशील छालाले पनि यो उपचार सहन सक्छ। तर यदि तपाईं गर्भवती वा स्तनपान गराउनुहुन्छ भने तपाईंले हाइड्राफेसियल गर्नुहुँदैन। यस बाहेक तपाईंलाई छालाको एलर्जी वा छाला सम्बन्धी कुनै रोग छ भनेपनि हाइड्राफेसियल गर्न हुँदैन। धेरै डन्डिफोर ( रातो,पोटिलो,सकिर्य दाना) भएका र रोजेसिया हुनेले पनि हाइड्राफेसियल गर्नु हुँदैन,जसले थप क्षति निम्त्याउन सक्छ।
हाइड्रोफेसियल अन्य ब्यूटीपार्लर फेसियल भन्दा कसरी फरक छ?
हाइड्रोफेसियल एउटा कस्टमाइज्ड उपचार हो जुन छालाको विषेशज्ञसंग वा ऐस्थेटिसिएनबाट स्किन किल्निकमा गर्न सकिन्छ। म्यानुअल एक्सट्रेक्शनको कमीले यो प्रक्रियालाई धेरै नियमित फेसियलहरू भन्दा छालामा सुरक्षित बनाउँदछ। हाइड्राफेसियलको प्रक्रियामा लगभग ३०-४५ मिनेट लाग्दछ। तपाईंले हाइड्राफेसियल पछि तत्काल र दिर्घकालिन नतिजाहरू देख्न र महसुस गर्न सक्नुहुन्छ।
हाइड्राफेसियलको उपचारपछि छालाको हेरचाह कसरी गर्नुपर्छ?
हाइड्राफेसियलको बारेमा यो सबैभन्दा राम्रो कुरा हो: शून्य डाउनटाइम। तपाईं मेकअप लागू गर्न सक्नुहुन्छ र उपचार पछि तुरुन्तै आफ्नो दिनको काममा जान सक्नुहुन्छ। त्यसपछि नियमित सनस्क्रीन, मॉइस्चराइज़र र सिरमको प्रयोग गर्न सकिन्छ।
हाम्रो अनुभवमा आजकल यस्तै नै र अन्य उपचारको नाममा प्रकृया नै नपुगी र विभिन्न रसायन प्रयोग गरेर छालामा हानी हुने विकृति फैलिरहेको छ। तसर्थ तपाईंले छालामा कुनै पनि उपचार गर्नुपूर्व एक पटक छाला रोग विशेषज्ञसँग नै परामर्श लिएर उपचार गर्न हुन अनुरोध गर्दछौं।
-(लेखकद्वय लेट मि इन स्किन हस्पिटलका छाला तथा सौन्दर्य विशेषज्ञ हुन्।)